Mudara raTinashe Muchuri: August 2012
Chikwata cheEDITH WeUtonga chonange Kenya neUganda
Chikwata cheEdith WeUtonga chiri pabasa. Muzvamburi wegitare redzvovero Edith Katiji ndiye ari pakatti pamufananidzo
Nyenyedzi dzirikuramba dzichipenyera vanasikana varimundima yezvekudavadika muZimbabwe zvichionekwa nekusumuka kwechikwata cheEdith WeUtonga nemusi wa30 Nyamavhuvhu, 2012 chatakananga kuKenya apo chichange chiri pamutambo wezvemimhanzi weBlankets and Wine Arts Festival uchaitwa misi inoti 1 na2 Gumiguru, 2012. Urwu ndirwo rwendo rwechikwata ichi rwekutanga kubuda muZimbabwe chichienda kundoratidzawo vanhu vokunze hunyanzvi nehumhizha hwacho pakubika mimhanzi.
Musi wa1 Gunyana, Edith Katiji uyo anova muvambi uye achiridza gitare reDzvovero muchikwata cheEdith WeUtonga achange achitungamirira zvidzidzo zvemumhanzi zvine donzvo rokuti, ‘Basa Ramadzimai Munezvemumhanzi MuZimbabwe (Zimbabwe Music: The Role of Women)’. Muzuva rinotevera, ndipowo chikwata chake chicharidza chiri icho chikwata chakatarisirwa kufadza vanhu pamutambo uyu kutanga nenguva dza530 manheru. Senzira yekushambadza chikwata kuvanhu vekuKenya, varongi vemutambo uyu vakavimbisa Edith Weutonga kuti nhau pamusoro pechikwata dzichange dzichitaurwa pamarhedhiyo nezvivhitivhiti zveyo. Musi wa4 Gunyana, chikwata cheEdith WeUtonga chinenge chapedza nezvemutambo weBlakets and Wine Festival chichanoridza kuAlliance Francaise kuMombasa makare muKenya. Mutambo uyu chakaurongerwa naCharles Houdart uyo anoshandira kuAlliance Francaise yemuZimbabwe. Musi wa7 Gunyana, chikwata ichi chichange chichivaraidza vanhu vekuKampala kuUganda uko chichanoridzira pasi pehurogwa hweGothe Institut, pamutambo wachakarongerwa naRoberta Wagner uyo anoshandira Gothe-Zentrum kana kuti Zimbabwe Germany Society.
Mukutaura kwamaneja wechikwata, Elton Mujanana anoti iye, ‘Chikwata cheEdith WeUtonga chinotora rwendo urwu serwakakosha zvikuru sekuti ndirwo rwekutanga.Izvozvi chikwata chave nemwedzi miviri chichigadzirira zuva rogaroga nezvemutambo uyu. Sechikwata, Edith Weutonga chichashandisa mukana uyu senzira yekupinda nayo kune imwe misika yekunze uyewo mitsva zvakare.’
Elton anoti, apo vakatumira tsamba yavo yekutsvaka mvumo yekuzova pamutambo uyu, varongi vemutambo uyu vakabva vaita tsvakurudzo yavowo padandemutande nezvechikwata ichi ndokuchiwana kuti Edith Katiji mumwe wemadzimai anotungamira chikwata chemimhanzi achiridza gitare redzvovero nokunyora nziyo muAfrica izvo zvinogona kunge zvakazopawo havi yokuti vati chikwata chive pamutambo wakachikoshera uyu.
Sekuona kwake Elton anoti kuridza kwakaita Edith WeUtonga pamutambo wezvevadavadi weHIFA paMain Stage kunogona kuvawo kwakabatsira mukusarudzwa kwechikwata ichi kuti chinoridza kuBlanket and Wine Festival. Zvsirizvo zvega, chikwata cheEdith WeUtonga chakakwanisa kuridza pamitambo yevadavadi inoitirwa munyika yakaita seHIFA, Intwasa, Ibumba, Chimanimani Arts Festival, YOCAF, Winter Jazz Festival neimwe mizhinji. 'Izvi zvinogona kunge zviri izvo zvakapa varongi vemutambo weBlankets and Wine Festival, havi yekunzwawo chikwata ichi chichivaraidza vanhu kuKenya.
Maneja weChikwata akaburitsawo pachena kuti muvambi uye muridzi wegitare redzvovero wechikwata ichi, Edith Katiji munhu anofarira kuita mubatirapamwe navamwe vaimbi. Izvi zvinoonekwa apo panguva yemutambo wekupedzesera paHIFA Edith Katiji akaridzira Oliver Mutukudzi gitare redzvovero parumbo rwake runonzi 'Tozeza Baba'. Zvisizvo zvega, Edith WeUtonga akamboridzazve naAlik Macheso kuJazz 105, pamutambo wainzi pasangana shasha dzekurova magitare edzvovero. Akazoridzawo zvakare naJosh Meck, pamutambo wadaidzwa kunzi, ‘Bass Combo’ uyo wakaitirwa paPrince Edward School. Edith akaonekwawo zvakare achibatana nechikwata chekuSeattle KuUSA chinonzi Publish Your Quest icho chinoridza musambo werock wakanyorovera. Nokuda kwekuti vawana mukana wekundosangana navamwe vadavadi vanobva kumabvazuva nekumadokero eAfrica, achashandisa mukana uyu kutsvaka vamwe vaimbi vekuita mubatirapamwe wekuimba navo.
Elton Mujanana anoti iye apo chikwata cheEdith WeUtonga chichainda kuKenya , chichanova mumiriri wenyika akanaka. Ikoko vanoti vachanosiya maCD nemaT/Shirt. Pamusoro pazvo chikwata chichandodambura nziyo dzacho tsaru neitsva dzichange dziri padambarefu racho ririkutevera. Vavariro yechikwata ndeyekuti kana chasvika kuKenya chigone kuridza musambo unoita kuti vanhu vanofarira misambo yakasiyana yemumhanzi vanakirwe vose pasina dambudziko.
Edith WeUtonga chikwata chinorova musambo wemuAfrica wakasanganiswa. Chinorovawo musambo weChimurenga zvakare. Ndinovimba kuti avo vachange vari pamitambo yese icharidzwa nechikwata ichi vachaduvikirwa pamwe nokutapirirwa nemimhanzi yacho. Chinofadza ndechekuti budiriro yose iyi irikuuya ichitevera dambarefu rechikwata ichi rimwe roga iro rachakatsikisa mugore ra2010 rinonzi, Utonga. Dambarefu racho rine nziyo gumi dzinosangnisira Chipo, Nhaka naTaisireva dzinovaraidza kunzwa. Elton Anopedzisira nokutendawo sangano reCulture Fund Of Zimbabwe nekuvabatsira nemari yematikiti endege.
Invitation to Harare’s Zimbabwe Writers Association (ZWA) meeting: September 1, 2012
ZWA is inviting you to its Harare members meeting to be held at the British Council, 16 Cork Road, Belgravia (opposite the South African Embassy) on Saturday September 1, 2012 from 12:00 to 4:30pm.
As requested in the last meeting by some of you, this time the discussion topic is ‘How To Make Money and a Livelihood Through Writing.’ Freelance artists; STEPHEN CHIFUNYISE, ALBERT NYATHI and VIRGINIA JEKANYIKA will be talking about how to earn a living from one’s art.
Those who were not at the last meeting are reminded to bring $10 membership fees. Remember: the major objective of ZWA is to bring together all willing individual writers of Zimbabwe in order to encourage creative writing, reading and publishing in all forms possible, conduct workshops, and provide for literary discussions.
- August 23, 2012 No comments: Links to this post
Dzimwe nguva nhema dzatinosangana nadzo muhupenyu hwedu dzinonditambudza. Apo ndange ndichida zvangu kukwira kombi kuti ndipinde muguta, mukomana anga achisheedzera kuti vanhu vakwire kombi yake ange achisheedzera achiti, ‘Huyai mukoma. Yazara. Handei. Yazara.’ Ndafamba ndichienda kukombi yake ndichida kuti ndimubvunze kuti ko kana yazara arikundidaizireiko, ndipo pandaona kuti kombi yake yange ine vatakurwa vatanhatu. Apa iye anenge achida vamwe gumi nevaviri kuti kombi yake inzi yazara. Ndamubvunza kuti sei achinyepera vanhu, iye ndokuti, ‘ibasa mudhara! Ndikasadaro vana vanofema mhepo kumba uku.’ Izvozvo vanhu vanga vakuuya vachipinda mukombi yake iye achienderera mberi nokusheedzera kuti yazara. Ndaramba kupinda mukombi yake. Ndamuudza kuti handipindi mukombi yemunhu anonyepa. Vamwe vatakurwa vanga vari mukombi vandiseka. Vandituka vachindipomera mhosva yekushaya chekumhanyira uye zvokuita mudhorobha. Vanga vachitonditi dai ndine chekumhanyira ingadai ndapinda mukombi ine munhu anonyepa kuti yazara iyo isati yazara. Yazouya imwe yangosheedzera kuti, ‘handei kutown,’ ndichibva ndapinda ndokusiya iya yokuti yazara iripo.
Tafamba kusvika mudhorobha. Rwendo rwangu rwanga rusingapereri ipapo, ndange ndichida kuenda kumaindasitiri ekuWorkington. Ikoko ndasangana neumwewo mukomana anga achidaidzira kombi yake achiti, ‘Two vasara. Two vasara.’ Ndafamba ndichienda kukombi iya ndokuwana kuti kombi yake yanga ichida vamwe vanhu vatanhatu kuti izare. Ndamubvunza zvakare kuti sei achinyepera vatakurwa zvakadaro, iye ndokuti, ‘Mashoko okushambadzira mudhara. Zvinotoda madegree nemadiploma izvi kuti tiwane mari. Handiti mauya henyu mudhara? Chikwirai tiende.’
Ndaramba kukwira kombi yake ndichiti handikwiri kombi yemunhu anonyepa. Zvikanzi nevanhu vanga vari mukomba, ndiri munhu asina chinangwa nehupenyu. Dai ndine chinangwa nehupenyu ingadai ndakwira pamwe chete navamwe. Ndazvibvunza zvangu kuti, ko ane chinangwa nehupenyu ndoupi anokwira kombi yaanoona kuti haina kuzara iyo ichinzi yazara kana munhu anoramba kuwira kombi inonzi yakazara iyo isina? Chinoputira vanhu chii chaizvo? Chinotipinza murima kunge tiri kumhanyira muchiedza? Kuti ndizvowo zvinoita kuti vanhu vamhanyire kunditambira chadonha iya inoitwa nemavhevhe anodonhedza emvuropu kana mari yekunyepera kuti vavhevhetedze vanhu here? Kana kuti ndizvo zvinoita kuti tisiye nhata dzinotisveta ropa dzichitisveta tichingoti ndizvo zvinoita kuti tirarame idzo dzichitotibira hutano hwedu sekubirwa kwatinoitwa nguva navakomana vamakombi tichikwidzwa kombi isina kuzara iyo ichinzi yazara? Kungwarawo here kwedu kunotikwidzisa, kombi izere nemanyepo?